ICottage yaseZen eseluNxwemeni-Hamba uye eLwandle!
Ixhotyiswe ngokupheleleyo kwigumbi le studio yabucala eHalf Moon Bay. Ukuhamba umgama ukuya elunxwemeni (iikhilomitha eziyi-0.4 ukuya eSurfers Beach), izibuko, iindawo zokutyela, iivenkile, kunye nendlela yonxweme. Kanye ngaphaya kwesitrato ukusuka kwi-Quarry Park kunye neekhilomitha zeendlela zokuhamba. Ipatio yezen yabucala kunye negadi ye-bamboo. Ukufikelela kwabucala kunye neendawo zokupaka ezinikezelweyo. I-Beach Cruisers ikhona ukuze ihlolwe kwindawo! Yonwabela ingca kunye neengxangxasi ezingasemva kwendlu (le ndawo yindawo ekwabelwana ngayo nathi).
Ingcinga kunye nenkathalo iye ekulungiseleleni le ndawo yotyelelo lwakho. I-cottage ixhotyiswe kakuhle kwaye ivula kwipatio yangasese enendawo yokuhlala. Iminyango emibini yangasese-enye ngegadi yezen ukuya kwindawo yokupaka. Omnye uphume kwindawo emangalisayo yangasemva kwendlu. Indawo engasemva kweyadi ekwabelwana ngayo iphuma ngqo kwimagazini iSunset.
4.90 · Izimvo eziyi-271
Eyona nto intle ehlabathini. Amakhulu eehektare okanye iindledlana kunye nendawo evulekileyo engaphaya kwesitrato. Ukuhamba nje okufutshane ukuya elunxwemeni kunye nendawo eninzi phakathi kwabamelwane. Ukutyhileka okunelanga kumazantsi!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Half Moon Bay